Inqubo evamile yokucolisa ikhofi kanye netiyi idinga ukusetshenziswa kwamakhemikhali anobuthi.
I-ultrasonic decaffeination iyindlela ephumelelayo evumela ukuthi kususwe i-caffeine ngokusebenzisa isizinda esisekelwe emanzini ngaphandle kokusebenzisa ama-solvents anonya.
I-decaffeination ye-Ultrasonic iyindlela ewusizo, ephumelelayo neyeluhlaza ukukhiqiza ikhofi ephezulu ye-decaffeinated, itiye kanye nemikhiqizo ye-cocoa.
I-caffeine yinto encibilikayo yamanzi, ukuze amanzi asetshenziselwe ukususwa kwe-caffeine kusuka ekhofi, itiye kanye ne-cocoa. Izinqubo zokudayiswa kwe-decaffeination zisebenzisa amakhemikhali njenge-decaffeinating agent (njenge-methylene chloride, CO2, noma i-ethyl acetate) ukusheshisa inqubo. Ngokusebenzisa isizinda samanzi esisekelwe yi-ultrasonic ngokuhlanganiswa namalahle acushiwe njenge-agent decaffeinating, ikhofi e-decaffeinated, itiye noma umkhiqizo we-cocoa ulungiswe ngenqubo yokuziqhenya ngokomzimba nangokwemvelo.
I-decaffeination esekelwe amanzi e-ultrasonic
I-decaffeination eyasiza nge-ultrasonically iyinkqubo yokuqinisa inqubo okuthiwa yi-Swiss water decaffeination.
Inqubo ye-decaffeination yamanzi e-ultrasonic isebenza ngokusebenzisa i-solubility kanye ne-osmosis ukususa i-caffeine kusuka kubhontshisi wekhofi, amaqabunga etiyi namahabhonta e-cocoa.
Esigabeni sokuqala, i-batch of ubhontshisi igxiliwe futhi ihanjiswe ngamanzi ashisayo ukuze ichithe i-caffeine. I-ultrasonication iyaziwa kakhulu ngokuqinisa izinqubo zesikhumba kusuka ku-botanicals. I-cavitation ye-ultrasonic ivula amangqamuzana futhi ikhuthaza ukudluliselwa kwamandla ukuze i-caffeine ikhishwe emanzini. Ngalokho, i-sonication ijubisa inqubo ye-decaffeination kakhulu.
SonoStation – Uhlelo lwe-ultrasonic lwe-Hielscher olunama-ultrasonicators angu-2x 2kW, i-tank enyakazayo nepompo – iyisistimu enomsebenzisi-friendly for isizinda.
Esigabeni sesibili, amanzi aqukethe ama-molecule akhiqiwe agciniwe futhi adlule ngesihlungi esenziwe ngokushisa. I-porosity yalesi sihlungi isayizi ukuthumba kuphela ama-molecule amakhulu e-caffeine, kuyilapho kuvumela ama-molecule amancane namafutha avela kuwo.
Lokhu kusho ukuthi isihlungi selahle sine-caffeine, kanti amanzi ahlungiwe aqukethe yonke into encane ephilayo, eyaziwa ukuthi inikeza ikhofi, itiye kanye necocoa iphunga labo elihlukile kanye nenani lomsoco.
Ubhontshisi be-decaffeinated, eziye zahlulwa ama-molecule e-caffeine ne-flavour, zilahlwa. I-flavour-caffeine-free and water polyghenol (eyaziwa nangokuthi "Green Coffee Extract") iyigugu kakhulu futhi isetshenziselwa ukususa i-caffeine kusuka ebhakeni elisha lamahhishi wekhofiya e-caffeine.
Njengoba la manzi agcwele ama-molecule we-flavour nezinye izinto eziphilayo, lezi zakhi azikwazi ukuchithwa ku-batch fresh of ubhontshisi. Ngakho-ke, ama-molecule e-caffeine kuphela akhishwa kumahhishi wekhofi emanzini nase-decaffeination ngaphandle kokukhipha iphunga namanye ama-phyto-amakhemikhali ayigugu.
I-ultrasonically yasiza i-decaffeination yamanzi iyindlela ehle kakhulu yokudambisa i-decaffeination yekhofi ephilayo, eyaziwayo ekhishwe kanye netiyi.
Hielscher Ultrasonics yisikhathi eside ehlangene ekukhiqizeni high-amandla ultrasonic izinhlelo for izizinda izinqubo. Amaprosesa ase-Hielscher 'ultrasonic afakwe emhlabeni jikelele ngezinhlelo zokusebenza ekudleni & isiphuzo, i-pharma, namakhemikhali.
Asigcini nje kuphela ukuhlinzeka ngamathuluzi amakhulu aphezulu, kodwa sisiza amakhasimende ethu ngolwazi olujulile. Izigaba zethu zesevisi yamakhasimende kusukela ekuboneni nasekuhloleni izifundo ukuze kusetshenziswe ukuthuthukiswa kanye nemishini yokushayela ekufakweni kwezinhlelo ze-ultrasonic ezingeni lezimboni.
Inikeza ububanzi obuningi beprosesa ye-ultrasonic kanye Izesekeli (njenge-sonotrodes, amaseli okugeleza nezigameko), singakuphakamisa uhlelo olufanele kakhulu olufeza izidingo uma inqubo yakho yesikhundla nemibandela. Ukufakwa kanye nokuhlelwa kabusha kwezinto ezikhona emigqeni yenqubo ekhona kungenziwa kalula njengoba extractors zethu ze-ultrasonic zingahlanganiswa ngaphandle kokuguqulwa okukhulu.
Abasebenzi bethu abaqeqeshwe kahle abacebisi, amakhemikhali, nabanjiniyela baqondisa amakhasimende ethu ekufakweni nokusebenza kahle. Imishini kaHielscher ine-robustness evelele futhi idinga ukugcinwa okuphansi kakhulu. Ukuqeqeshwa okusebenzayo, ukuthunyelwa kokuqala, kanye nokugcinwa kwezinsizakalo, sineqembu eliqeqeshwe kahle elisiza amakhasimende ethu.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Decaffeination
Ikhwalithi ephakeme (ephilayo)
Kunzima kakhulu ukugunyazwa
Ukufakwa okulula nokulungiswa kabusha kwe-retro
UVíctor J. Huamaní-Meléndez; URoger Darros-Barbosa (2018): Ukuphakama okukhulu kwe-ultrasound kwasiza inqubo ye-decaffeination yenkokhelo yekhofi ephakathi. J Food Sci Technol (December 2018) 55 (12): 4901-4908.
Phakathi nenqubo ye-decaffeination, i-caffeine isusiwe kubhontshisi wekhofi, i-cocoa, amaqabunga etiyi, noma ezinye izinto eziphathelene ne-caffeine. Iziphuzo zika-decaffeinated ezifana nekhofi e-decaf noma itiye ziyadingeka kakhulu. Inqubo ye-decaffeination (i-UAD) eyenziwe nge-ultrasonic-assisted (i-UAD) isiza ukukhiqiza imikhiqizo ye-decaffeinated ephezulu, ephilayo kanye enempilo. Ukugwema amakhemikhali ahlukumezayo kunomnotho ngoba izindleko zamakhemikhali kanye namandla abo-ukululama okukhulu ngokuphuza amanzi akudingeki. Umkhiqizo owenziwe ngobunandi (ikhofi, itiye, i-cocoa) inempilo, ngoba imikhiqizo ye-solvent-decaffeinated ye-solvent ingatholakala ngemuva kokususwa kwe-solvent. Lokhu kwenza i-UAD ibe nenhle kakhulu ngokwezemvelo nangokwemvelo.